Ministera Aterineto - Mahatalanjona Andriamanitra
Ny Tompontsika, Andriamanitra Tsitoha, dia mahagaga fa Andriamanitra tena Izy tokoa. Ny lanitra sy ny tany dia tsy afaka hitoetra Aminy satria Izy dia lehibe noho izay rehetra hitantsika sy fantatra. Ny voninahiny dia be voninahitra ary ny heriny dia tsy misy lanjany. Masina ny Raintsika any an-danitra ary mandrakizay ny fitiavany. Ny fahendreny dia mihoatra noho ny olombelona rehetra. Mankalaza mandrakariva ny fiderany ny lanitra sy ny tany fa Izy no mendrika.
Tsy misy hafa tahaka ny Tompo satria Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo Izy. Ny lehilahy dia hitady ny fandriam-pahalemana mandritra ny fotoan-tsarotra, saingy hahita azy ireo fotsiny raha mitady ny Andrian'ny Fiadanana. Ny tena fiadanana dia avy amin'ny Tompo Andriamanitra Tsitoha ary ny fiadanany dia mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Mitadiava ny Tompo amin'ny fonao manontolo ary fantaro fa afaka manampy anao izy. Andriamanitra ho anao ary tsy hahafoy anao na dia mijaly noho ny fitsapana sy ny fahoriana aza ianao. Aza matahotra an'i Jehovah ianao sy ianao ka mendrika hoderaina.
Andriamanitra dia lasa iray tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy, ary tamin'ny rany no nahatonga antsika ho mendrika an'Andriamanitra satria nanasa ny fahotantsika Izy. Ilay Raintsika any an-danitra dia nanavotra antsika tamin'ny alalan'ny Zanak'ondry. Nohamasinina sy nohamarinina tamin'ny anaran'ny Tompo Jesoa Kristy sy tamin'ny Fanahy Masin'ny Tompo Andriamanitra Tsitoha isika. I Jesoa Kristy no vato fehizoro indrindra no nametraka antsika tsirairay tamina trano iray mahafinaritra sy masina izay toerana fonenan'Andriamanitra ao amin'ny Fanahy Masina. Ny Raintsika Masina dia mendrika ny fotoananao sy ny asa fanompoana ao amin'ny tanimboaloboky ny Tompo.
Matokia ny Tompo amin'ny fo manontolo ary fantany fa hanao zavatra izy. Fantaro foana fa tsy irery ianao amin'ny an'ny Anjelin'ny Tompo ho an'ireo izay mahazo famonjena. Tia anao ny Tompo ary miaraka aminao Izy. Iza no mahatohitra ny Tompon 'ny Maro? Tsy misy olona afaka ary tsy hisy mihitsy. Miezaha hahafantatra fa ny I Jesoa Kristy no tena mijoro ho azy. Miderà ny Tompontsika, Andriamanitra Tsitoha, fa Izy no mendrika.
Ny fiangonan'i Kristy dia manasa anao hivavaka amin'ny Tompo miaraka amintsika. Manana toerana hanompoana an'Andriamanitra isika ary hanampy anareo amin'ny fandehanareo miaraka amin'ny Tompo. Tsidiho ny fiangonan'i Kristy ao amin'ny fiaraha-monina misy anao.
Noho ny antony nanjakan'i Kristy,